1.Biib biraha aan xuduud lahayn: biibiile aan xuduud lahayn waa nooc ka mid ah birta dheer oo leh qaybta godan oo aan lahayn tollayn. Biibiilaha birtu wuxuu leeyahay qayb godan, kaas oo si weyn loogu isticmaalo daabulka dareeraha, sida saliidda, gaaska dabiiciga ah, gaaska, biyaha iyo qaar ka mid ah qalabka adag. Marka la barbardhigo birta adag sida birta wareegsan, tuubo aan xuduud lahayn waxay leedahay isla foorarsiga iyo torsionka iyo miisaanka fudud. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa soo saarista qaybaha qaabdhismeedka iyo qaybaha farsamada, sida tuubada qodista batroolka, usha gudbinta baabuurta, jir -baaskiilka iyo isteerinka birta ee loo isticmaalo dhismaha. Waxay hagaajin kartaa heerka isticmaalka maaddada, fududeyn kartaa habka wax -soo -saarka, kaydinta agabyada iyo waqtiga wax -qabadka iyadoo la adeegsanayo tuubo aan xuduud lahayn si loo soo saaro qaybaha giraanta, sida giraanta dhajinta duubista, gacmo -gacmeedka jaakada, iwm. hub. Foostada iyo foostadu waxay ka samaysan yihiin tuubo bir ah. Marka loo eego qaabka aagagga isgoysyada ah, tuubooyinka birta ah waxaa loo qaybin karaa tuubo wareegsan iyo tuubo qaab gaar ah leh. Sababtoo ah aagga goobada ayaa ah tan ugu weyn marka la eego xajmiga ku wareegsan, dheecaan badan ayaa lagu qaadi karaa tuubada wareegsan. Intaa waxaa dheer, marka qaybta giraantu ay qaadato cadaadiska shucaaca gudaha ama dibaddaba, xooggu waa isku mid. Sidaa darteed, inta badan tuubooyin aan xuduud lahayn waa tuubooyin wareegsan, kuwaas oo u qaybsan rogid kulul iyo rogid qabow. Qalabka caadiga ah: 20 #, 45 #, Q345, 20g, 20Cr, 35CrMo, 40Cr, 42CrMo, 12CrMo, 12Cr1MoVG, 15CrMoG, iwm; Taxanaha bir -birta ah waa nooc bir ah oo wareegsan oo dheer oo godan, kaas oo si weyn loogu isticmaalo batroolka, kiimikada, caafimaadka, cuntada, warshadaha iftiinka, aaladaha farsamada iyo dhuumaha kale ee warshadaha iyo qaybaha qaabdhismeedka farsamada. Intaa waxaa dheer, marka xoogga foorarsiga iyo torsionku ay isku mid yihiin, culeysku wuu fudud yahay, sidaa darteed waxaa sidoo kale si ballaaran loogu adeegsadaa soo saaridda qaybaha farsamada iyo dhismayaasha injineernimada. Sidoo kale waxaa badanaa loo isticmaalaa alaabta guriga, weelasha jikada, iwm, agabyada caadiga ah: 201, 304, 316, 316L, 310, 310S, iwm.
2. Saxanka birta ah: waa bir bir ah oo la shubay bir la shubay oo la cadaadiyey qaboojin ka dib. Waa mid fidsan oo leydi leh, oo si toos ah baa loo rogi karaa ama looga gooyn karaa xarriiq ballaaran oo bir ah. Saxanka birta ah wuxuu u qaybsan yahay rogid kulul iyo duudduub qabow sida waafaqsan rogid. Marka loo eego dhumucda saxanka birta, saxanka birta khafiifka ah <4 mm (0.2 mm ugu khafiifsan), saxan bir qaro weyn leh 4 ~ 60 mm, saxan bir aad u qaro weyn 60 ~ 115 mm. Ballaca xaashidu waa 500-1500 mm; Ballaca saxanka qaro weyn waa 600-3000 mm. Marka loo eego noocyada birta, waxaa jira bir caadi ah, bir tayo sare leh, birta daawaha, birta guga, birta birta ah, birta aaladda, birta kuleylka u adkaysta, birta sita, birta silikon iyo xaashi birta saafiga ah ee warshadaha; Marka loo eego adeegsiga xirfadeed, waxaa jira saxan foosto oo saliid ah, saxan dhaldhalaal ah, saxan aan xabbaddu karin, iwm; Marka loo eego dahaadhka dusha, waxaa jira xaashi galvanized, tinplate, saxan rasaas, saxan bir ah oo ka kooban caag, iwm. Waxyaabaha caadiga ah: Q235, 16Mn (q355b), 20 #, 45 #, 65Mn, 40Cr, 42CrMo, 304, 201, 316 , iwm.
3. Biibiile alxanka: biibiile bir ah oo alxanka, oo sidoo kale loo yaqaan dhuumaha alxanka, waa biibiile bir ah oo ka samaysan saxan bir ah ama xariijin ka dib curling iyo sameynta, oo leh dherer go'an oo dhererkiisu yahay 6 mitir. Habka wax -soo -saarka ee biibiilaha birta ah ee alxanka waa mid fudud, wax -soo -saarka wax -soo -saarku wuu sarreeyaa, noocyada iyo qeexitaannadu waa badan yihiin, maalgashiga qalabku wuu ka yar yahay, laakiin xoogga guud wuu ka hooseeyaa biibiilaha birta aan xuduud lahayn. Biibiile bir ah oo alxanka ah ayaa loo qaybiyaa tuubooyin toos ah oo alxanka iyo biibiile alxanka oo isdabajoog ah sida waafaqsan qaabka alxanka. Kala soocidda habka wax soo saarka: kala soocidda geedi socodka - arc welded biibiile, iska caabbinta biibiilaha alxanka, (soo noqnoqoshada sare, soo noqnoqoshada hoose) gaas alxanka biibiilaha, foornada biibiilaha alxanka. Alxanka tooska ah ee tooska ah waxaa loo adeegsadaa dhumucda yar ee biibiilaha alxanka, halka alxanka muquuninta loo isticmaalo tuubbo weyn oo alxanka dhexroor weyn leh; Marka loo eego qaabka dhammaadka ee biibiilaha birta ah, waxaa loo qaybin karaa tuubooyin alxanka wareegsan iyo qaab-gaar ah (afargeesle, leydi, iwm.) Sida laga soo xigtay agabyo iyo adeegsiyo kala duwan, waxaa loo qaybin karaa dareeraha miinada gudbiya biibiilaha birta ah ee alxanka, dareeraha cadaadiska hooseeya ee gudbiya biibiilaha birta alxanka galvanized, rooga conveyor rooga biibiilaha birta alxanka, iwm. qiimo jaban, horumar degdeg ah. Awoodda biibiilaha welded ee muquuninta ah ayaa guud ahaan ka sarreeya tan dhuuban ee tooska ah. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro dhumuc weyn oo biibiile alxanka leh oo cidhiidhi ah, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro tuubo alxanka dhexroor kala duwan leh oo ballaadhkeedu la mid yahay. Laakiin marka la barbardhigo isla dhererka biibiilaha tolidda tooska ah, dhererka alxanka wuxuu kordhaa 30 ~ 100%, xawaaraha wax -soo -saarkuna wuu hooseeyaa. Dhexroor weyn ama biibiile alxanka qaro weyn leh ayaa badanaa laga sameeyaa biilka birta si toos ah, halka tuubbo alxanka yar iyo dhuuban alwaax dhuuban oo kaliya ay u baahan tahay in si toos ah loogu xiro birta birta. Kadib nadiifin fudud ka dib, sawiridda siliggu waa OK. Si loo hagaajiyo iska caabinta daxalka ee biibiilaha birta ah, tuubada birta guud (biibiile madow) ayaa la galvanized. Waxaa jira laba nooc oo biibiile bir ah oo galvanized ah, galvanizing-dip galvanizing iyo electro galvanizing. Dhumucda galvanizing-dip-ku-dhuuban waa qaro weyn, iyo qiimaha galvanizing elektroolka waa yar yahay. Qalabka caadiga ah ee biibiilaha alxanka waa: Q235A, Q235C, Q235B, 16Mn, 20Mn, Q345, L245, L290, X42, X46, X60, X80, 0Cr13, 1Cr17, 00cr19ni11, 1Cr18Ni9, 0cr18ni11nb, iwm.
4. Tuubo duuban: tuubada la duubay ayaa ka go'an soo saarista noocyada kala duwan ee tuubooyinka la duubay iyo qalinka birta leh ee leh tolmo wareegsan iyo siddooyin dhaadheer, waxaana loo beddelaa iyada oo lagu saleynayo isla tilmaamaha iyo tusaalooyinka qalabka tuubbooyinka dhaqameed ee duubnaa. Shaqada lagu kordhinayo xuduudaha aaladda duubista tuubada 30% ayaa buuxineysa farqiga uusan qalabka duubista dhaqameedku soo saari karin. Waxay soo saari kartaa tuubooyin bir ah oo leh dhexroor ka badan 400 iyo dhumucda derbiga 8-100 mm. Dhuumaha duuban ayaa si weyn loogu adeegsadaa batroolka, kiimikada, gudbinta gaaska dabiiciga ah, biyo -gelinta iyo biyo -gelinta magaalooyinka, kululaynta, bixinta gaaska iyo mashaariic kale. Qalabka ugu waaweyn waa Q235A, Q345B, 20, 45, 35cimo, 42cimo, 16Mn, iwm